109 Askari Oo Dowlada Ruushka Looga Dilay Dalka Suuriya. – Bogga Calamada.com
109 Askari Oo Dowlada Ruushka Looga Dilay Dalka Suuriya.
January 30, 2016 12:58 pm Views: 25
Ilo ku dhow dhow Nidaamka Nuseyriga ee dalka Suuriya ayaa shaaca ka qaaday tirada Askarta Ruuska ee lagu dilay dagaalka ka soconaya dalkaasi, tan iyo bishii September ee sanadkii hore, markaas oo Dowladda Ruushku ay ku lug yeelatay dagaalka halkaas ka socda.
Wakaaladda Wararka Anadol ee laga leeyahay dalka Turkiga ayaa kasoo xigatay Saraakiil ka tirsan Ciidamada Bashaar Al-Asad oo diiday in magacooda Warbaahinta loo adeegsado in 109 Askari oo Ruush ah inay ku dhinteen dalka Suuriya iyagoo taageeraya Ciidamada Nidaamka, kuwaas oo muddo Shan sano ah dagaal xooggan kula jira dagaal-yahannada Kacdoonka ka wada dalkaasi.
Ilo wareedyadu waxay intaas ku darayaan in Ciidamada Dowladda Ruushka ee dalka Suuriya ku sugan in saldhigga ugu weyn ay ku leeyihiin tuulada lagu magacaabo Jooriin, taas oo isku xirta gobollada Idlib, Xamaah iyo Laadiqiyah. Kooxo qaabilsan farsamada diyaaradaha iyo Sawaariikhda ayaa sidoo kale fariisimo ku leh magaalada Dimishiq iyo gobollada kala ah Xamaah, Ximis iyo Xasakah.
Askartan Ruushka ee lagu dilay dagaalka Suuriya waxaa qaarkood lagu dilay dagaallo toos ah oo ka dhacay furimaha dagaalka, qaarkood waxay ku dhinteen howl-gallo ay ka qeyb galeen Ciidamada gaarka ah, iyadoo qaarkoodna ay ku dhinteen Shilal diyaaradeed, kadib markii lasoo riday diyuurado Helicopters ah oo ay la socdeen, sida laga soo xigtay Ilo Wareedyadaasi.
Diyaaradaha Dagaalka ee Dowladda Saliibiyada ee Ruushka ayaa bishii September ee lasoo dhaafay waxay dalka Suuriya ka billaabeen duqeymo xagga cirka ah oo ay ku taageerayaan Nidaamka Nuseyriga, inkastoo duqeymahani ay yihiin kuwo aad u culus oo khasaare badan dhaliyay, haddana waxaa aad u yar guulaha dhinaca dhulka ay kasoo hooyeen Ciidamada Nuseyriyada iyo Maleeshiyaadka Shiicada ee ay kaashaanayaan.